China 20 lita cheetainer akpa na igbe ụlọ ọrụ na suppliers | Kaiguan
20 liter akpa cheetainer n'ime igbe
Akpa Cheertainer na nkwakọ ngwaahịa igbe bụ akpa ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na igbe na uru dị mma nke ihe siri ike ma ọ bụ nke siri ike, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke na nhọrọ ndị a niile. Ọ nwere akpa rọba nke nwere ụdị cube, ọtụtụ oyi akwa, mgbata, okpu ma ọ bụ valvụ na igbe kaadiboodu.
Akpa cheetainer anyị na nkwakọ ngwaahịa bụ nke plastik multilayer mere. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ.
Ngwọta akpa Cheertainer
BAG CHEERTAINER na ngwa igbe
Gụnyere mmiri mmiri fatịlaịza, a na-ejikwa akpa anyị dị na igbe maka mmiri mmiri na mmiri viscous ndị ọzọ.
Enwere ike iji ya mee ihe oriri na ihe ọṅụṅụ, dị ka purees, sauces, vinegar, Japanese sake, mmiri ara ehi, ihe ọṅụṅụ, mmanya, biya, wdg.
Ọ nwere ike idobe mmiri mmiri fatịlaịza, gụnyere adhesives, ọrụ ugbo, mmiri mmiri fatịlaịza, ink, mmanụ mmanu, agba, mkpuchi, mmanụ ala, mmiri mmiri fatịlaịza, diluent, sanitizer, mmanya na-egbu egbu, hypochlorous acid disinfectant, diluent, gel ultrasound, hematology reagent wdg.
Ihe ịchọ mma na ihe nlekọta onwe onye, ​​dị ka ihe nchacha, ncha ntutu, ncha mmiri mmiri, ntụ oyi, ude mmiri na-arụ ọrụ nke ọma na akpa ụdị dabara adaba.
Ike Ihe HSCcode Vavle Dimeter Akụrụngwa Nha ịbụ Akụkụ ngwaahịa
5L Akpa kwụ ọtọ na igbe 39232900 φ32mm N'ime oyi akwa PA; elu oyi akwa PA+PE. 68g 200*390*180mm
10L Akpa kwụ ọtọ na igbe 39232900 φ32mm N'ime oyi akwa PA; elu oyi akwa PA+PE. 82g 250*470*230mm
18L Akpa kwụ ọtọ na igbe 39232900 φ32mm N'ime oyi akwa PA; elu oyi akwa PA+PE. 118g 290*540*270mm
20L Akpa kwụ ọtọ na igbe 39232900 φ32mm N'ime oyi akwa PA; elu oyi akwa PA+PE. 134g 300*570*300mm
URU BAG CHEERTAINER N'igbe
☑ Dị fechaa ma dị mfe ijikwa, nhọrọ kacha mma maka njuputa.
☑ A na-echebe ngwaahịa ahụ site na ìhè na ikuku, nke na-enye ya ohere ichekwa ihe onwunwe ya niile ruo mgbe ejiri ya kpamkpam.
☑ Mpụta mmepụta na-adị mgbe niile ma na-adịgide adịgide, na-enweghị ikuku ikuku ma ọ bụ splashing.
☑ Nhazi ya na-enweghị ntụpọ na-enye ohere 99% nke mmiri mmiri na-ekpochapụ.
☑ Akpa ahụ na-anọgide kpamkpam n'ime igbe ahụ, si otú a na-egbochi okpu ịkwaga n'oge njem.
☑ Mbelata dị ukwuu na oriri plastik ma e jiri ya tụnyere arịa siri ike.
☑ Mbelata na olu nkwakọ ngwaahịa, ma mgbe efu ma mgbe juru.
☑ Nchekwa dị ukwuu na ohere na ngwa ngwa na ụgwọ gburugburu ebe obibi.
☑ Nkwado nka na ụzụ na nhazi ahaziri iche.
☑ Igbe katọn na-enye ohere buru ibu maka nkwurịta okwu eserese.
20 liter akpa cheetainer n'ime igbe maka ijuputa mmanya na soy sauce abụghị akpa gị n'ime igbe. Ọ na-enye ndị ahịa ihe ngwungwu imewe nke na-arụ ọrụ ohiri isi na-ekesa na iji. Emepụtara ka ọ bụrụ ụdị igbe, Cheertainer nwere ikike pụrụ iche n'ichepụta ya na ihe owuwu ya. Emepụtara ya na gussets n'akụkụ nke "ụdị dabara adaba" na akpa ahụ, Cheertainer na-enye ohere maka nnyefe zuru oke n'efu.
Ọ nwere nnukwu ihe nkwụsị dị iche iche, mmechi na valves. Ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọkarị mgbanaka maka mmanya mmanya na soy sauce.
A haziri igbe anyị nke ọma. Dị ka ọ na-eji kaadiboodu, akụkụ niile nwere ike ibipụta, nke na-enye nnukwu nkwurịta okwu na mgbasa ozi n'elu ebe.
Nke gara aga: Ezigbo ndị na-ere ahịa 5 Liter Cubitainer - eriri afọ plastik nwere ike imebi ldpe cubitainer 5l – Kaiguan
Osote: Mpempe mmiri BPA efu na-adaba (ya na Spigot)
3l akpa na igbe
5 lita akpa
Akpa N'ime Igbe
Akpa n'ime igbe 1l
Akpa N'ime igbe 3l
Akpa Na Nkwakọ ngwaahịa
Ultrasound Gel akpa
Akpa mmanya na igbe na mgbata
Akpa ụdị dabara adaba na igbe (cheertainer) maka chem...
Akpa vetikal mbelata ọnụ ahịa gburugburu ebe obibi (che...
Kwuo ihendori mmanya cheetainer akpa n'ime igbe
Ngwunye ọkwa nri obere akpa 1 liter maka j ...